विश्वकपमा रोनाल्डोको प्रभाव कति ? पर्चुगलले उचाल्छ त उपाधि ? « Nepal's number 1 Entertainment news portal
विश्वकपमा रोनाल्डोको प्रभाव कति ? पर्चुगलले उचाल्छ त उपाधि ?
Published : 1 June, 2018 12:16 pm
विश्वकप फुटबल नजिकिँदै जाँदा विश्वकपमा चर्चामा रहने खेलाडीको चर्चा पनि चुलिएको छ । अर्जेन्टिनाका मेसीको चर्चा हुँदै गर्दा पोर्चुगलका रोनाल्डोको चर्चा नहुने कुरै हुँदैन । यी दुई खेलाडी यस्ता हुन् जसका फ्यान संसारका कुनाकुनामा छन् । कतिपय चिया गफमै यी दुई फुटबलरका फ्यानबीच नै चर्काचर्की हुने गर्छ ।